शुक्रवार, श्रावण १५, २०७८ चिन्तामणि रेग्मी
मित्रताको कुरा गर्दा महाभारत कथामा उल्लेखित द्रुपद र द्रोणको मित्रताको कथा यँहा उल्लेख गर्नु सान्दर्भिक होला । बालापनमा द्रुपद र द्रोण एउटै गुरुकुलमा पढथे । उनिहरुबिचमा प्रगाढ मित्रता रहेको थियो । त्यसैक्रममा एकदिन द्रुपदले आफु राजकुमार भएकोले पछि राजा भएपछि द्रोणलाई आफ्नो आधा राज्य दिने सद्भावसहितको बाचा गरे । पढाई सकेर दुवैजना आफ्नै संसारमा भुले । समय बित्दै जाँदा द्रोण गरिविको संकटमा परेपछि बालापनका मित्र र उनको बाचा सम्झेर उनलाई भेटन दरवारमा पुगे । द्रोणले आफ्नो परिचय दिदै पुरानो बाचालाई सम्झाए ।
तर द्रुपदले बालापनमा के के भनियो के के गरियो त्यो त्यतिबेलाको कुरा भएको दम्भयुक्त तर्क गर्दै हाल आफु राजा भएको र द्रोणसंग मित्रताको स्तर नमिल्ने घमण्ड देखाए । तर द्रोणको हैसियत सदैव उस्तै रहेन किनकी समय बलबान थियो । पछि द्रोण वीर पाण्डवहरुका गुरु बने । पाण्डवहरुलाई शिक्षा दिइसकेपछि एक दिन गुरु दक्षिणा लिने क्रममा उनले आफ्नो अपमानको बदला लिने सोच राखी द्रोणले आफ्ना शिष्यहरुलाई गुरुदक्षिणाको रुपमा द्रुपदलाई बाधेर ल्याउन अहृाए ।
गास छोड्नु तर साथ नछोडनु भन्ने उखान त्यसै कथिएको कँहा हो र ?
पाण्डवले गुरुको आज्ञा मुताविक द्रुपदलाई बाधेर ल्याए । द्रुपदलाई यो अवस्थामा देखेर द्रोणलाई हाँसो उठयो । उनि संयमित भए, हाँसेनन । आँखामा आँखा जुधाएर हेर्दै भने पुर्वराजा द्रुपद नडराउनुहोस । म तपाईंलाई केहि गर्दैन । बालापनमा तपाई र म बिचमा गहिरो मित्रता थियो । संगै पढयौ, सिक्यौ, खायौ, बस्यौ, खेल्यौ । पछि तपाई राजा हुनभयो । ऐश्वर्यको मात लाग्यो । म संगको मित्रता बिर्सनुभयो । बचनबद्घता बिर्सनुभयो । तर म अझैपनि तपाईसित मित्रता चाहन्छु ।
अहिले तपाई अकिन्चन, म सत्तासिन । हामी बराबरी स्तरमा छैनौं । मित्रता त बराबरीका बीचमा मात्र हुन्छ क्यार । हैन ? यसै भएर म तपाईलाई पाञ्चाल राज्य आधा फिर्ता दिन्छु, हुन्छ ? आचार्य द्रोण आसनबाट उठे । सरासर गएर द्रुपदको बन्धन खोले । उठाएर अङ्कमाल गरे । उचित सम्मानसाथ बिदा गरे । द्रोणले द्रुपदलाई मित्रताको गतिलो सबक सिकाउदै पेचिलो प्रहार गर्दै भने मलाई तिम्रो राज्यको लोभ होइन किनकी मित्रता पद, प्रतिष्ठा र सम्पत्तिभन्दा उच्च स्तरको हुन्छ । त्यसैगरी पुर्विय दर्शनका कृष्ण र सुदामाको मित्रता, राम–लक्ष्मणको मातृत्व होस या त महाभारत कथामा कृष्ण अर्जुनको मित्रताको गहनतामा जिवनको दृष्यचित्रको सन्देश लुकेको पाइन्छ । जिवनमा असल मित्र मार्गदर्शक र आमावुवा स्मरणीय हुन्छन ।
मित्रता त बराबरीका बीचमा मात्र हुन्छ क्यार । हैन ? यसै भएर म तपाईलाई पाञ्चाल राज्य आधा फिर्ता दिन्छु, हुन्छ ?
प्रकाशित मिति: शुक्रवार, श्रावण १५, २०७८, ०९:१७:०९